Azonao atao ve ny manampy ahy hahazo ny tombontsoa azo avy amin'ny SEO fanazavana?
Alohan'ny zavatra hafa, andao hijery ny glossary lehibe momba ny backlinks ao amin'ny SEO. Tokony hahafantatra ireo fepetra ara-dalàna momba ny rohy ao amin'ny tranonkala ianao ary ny dingan'ny fananganana rohy amin'ny ambaratonga. Andeha hojerentsika ny fotokevitra momba ny backlinks izay hazavaina amin'ny famaritana fototra.
Link Juice - mijoro ho an'ny tombana ankapobeny, fa tsy ny famaritana voafaritra mazava tsara
- logiciel gestion de temps de travail. Ny sira mifampizarizary dia "hery", "lanjany", ary "fahefana" amin'ny rohy iray navotsotra avy amin'ny pejy Internet iray ho an'ny hafa. Ity fehezanteny ity dia ampiasaina hanomezana fanazavana momba ny kalitaon'ny backlinks amin'ny DoFollow izay nampidirina ao amin'ny code HTML. Ireo rindran-damina toy izany dia matetika natao handefasana na hamerenana ny iray amin'ireo tranonkala rohy manan-danja indrindra fantatra amin'ny hoe "Score PageRank".
Backlinks amin'ny DoFollow
DoFollow rohy - ny karazana backlinks tokana azo ampiasaina amin'ny tanjona SEO. Raha tsorina, hery matanjaka goavana amin'ny DoFollow dia mitodika indrindra amin'ny fahafahany mametraka Link Juice. Ireo rohy ireo dia miompana amin'ny fikirakirana ny endriky - midika izany fa manampy amin'ny fikarohana mikaroka botsika amin'ny alalan'ny fizarana sy pejy amin'ny tranokalanao na blôginao ianao.Amin'izany fotoana izany, ny backlinks miaraka amin'ny DoFollow dia manolotra lalana ivelany hanondroana ny takila mankany amin'ny toerana hafa any amin'ny Internet. Midika izany fa ny mpisera tsirairay dia afaka "manaraka" ny lalan'ny fifandraisana mifandraika amin'izany.
Backlinks amin'ny NoFollow
Tsy azo atao ny manohy ny rohy sisa ny karazana rohy hafa, na dia manana lanjany sy hery be dia be aza ny SEO. Ampidirina amin'ny "NoFollow tag" ity rohy ity dia tsy afaka handalo Link Juice. Noho izany, tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny toerana misy azy ireo. Ohatra, ny rohy NoFollow dia azo ampiasaina raha mila mifandray fifandraisana amin'ny tranokala na bilaogy tsy azo itokisana tanteraka ianao. Na dia izany aza dia mbola ilaina ihany izy ireo amin'ny fampiroboroboana tsara kokoa ary afaka manampy anao hanangana sehatra samihafa amin'ny rohy samihafa amin'ny hery sy tanjona tsy mitovy. Ary indrindra ny fahasamihafana dia ny fananana tombontsoa indrindra amin'ny rohy momba ny rohy. Midika amiko fa ity sora-baventy ity dia tena manan-danja tokoa ho an'ny Google ho raisina an-tsarimihetsika rehefa manome ny laharam-pifidianana.
Ity sokajin-drakitra ity dia azo hazavaina ho fifandraisana marefo amin'ny ankapobeny izay matetika noforonina amin'ny ezaka mafy mba hampitombo ny toerana misy ny fikarohana misy amin'izao fotoana izao amin'ny vidiny rehetra. Midika izany fa ny fandefasana spammy, toerana tsy misy dikany na tsy ara-dalàna, ireo rohy ireo dia mety hanimba ny ezaka SEO anao manontolo, fa tsy hanome fanatsarana tena izy. Izany no antony tokony hampandrenesanao sy hanalaviranao ny rohy ambany tsy misy kalitaona izay mahazatra be dia be avy amin'ny kodiarana fifandraisana (fifanakalozana fifandraisana), PBNs (tambajotram-bilaogy tsy miankina), na ireo mpandraharaha maloto izay manolotra rohy voajanahary voajanahary azo amidy.
Ity tranoben'ny rohy ity dia ampiasaina hanomezana fototra mafy orina amin'ny tranokalan'ny tranokala, mitondra anjara biriky amin'ny traikefa mora kokoa sy mora kokoa. Ny rohy anaty dia manome ny andalana ao anatin'io sehatra io - fotsiny hoe mora kokoa ny mivezivezy amin'ny sehatra samihafa sy pejy mifandraika amin'ny tranokala na blôgy. Mariho anefa, fa ny rafitra lojika tsara dia mbola famantarana mahazatra, izay afaka mandray anjara amin'ny toerana ambony mety ho laharam-pikarohana ao anatin'ny lavaka, farafaharatsiny indraindray.